Nezvedu - Tangshan Jidong Mechanical uye Electrical Equipment Co, Ltd.
Tangshan Jidong Mechanical uye Electrical Equipment Co, Ltd
Tangshan Jidong Mechanical uye Electrical Equipment Co, Ltd ikambani inogadzira sevhisi-yakanangana nekambani, iri mubatanidzwa neTangshan Jidong Equipment & Engineering Co, Ltd uye Tangshan Jidong Cement Co., Ltd. Ndiyo inomirira chikuva chekubatanidzwa kwakarongeka. , centralized manejimendi uye inobatanidza mashandiro emukati zviwanikwa zveJidong Development Boka. Iyo kambani ine makore zana emidziyo yekugadzira ruzivo uye anopfuura makore makumi matatu emakore ekuchengetedza ruzivo rweiyo nyowani yakaoma maitiro simende yekugadzira mitsara.
Iwo epakati mabhizinesi anofukidza simenti michina uye zvipenga zvikamu zvinopihwa, zvishandiso uye zvipenga zvikamu zvekugadzirisa, hunyanzvi hunyanzvi uye matanho, mashandiro uye kugadzirisa kweyekugadzira tambo, manejimendi manejimendi etc. kupa nyanzvi yakarongeka mhinduro kune vatengi.
Nzvimbo nhatu dzebhizinesi:
1.e-commerce yebasa chikuva
2.Online yekutengesa zvigadzirwa zvakaenzana
3.Custom mhinduro pazvigadzirwa zvehunyanzvi, chirongwa chekuchengetedza uye mabasa ehunyanzvi
4.Share zvinyorwa mukati memitezo yemabhizinesi.
iyo nzvimbo inopa yekuongorora sevhisi yemidziyo yekudzora pane saiti zvikanganiso zvikanganiso, uye kuwedzera michina inomhanya kugadzikana.
Iwo mabhizinesi masere ari pazasi:
Nyanzvi Yehunyanzvi Chikwata:
1.system calibration yeiyo yekugadzira mutsara
4.oil kuyedza uye kuongorora
5.foundation kugadzirisa kugadzirisa,
8. simba uye static kuyedzwa kweiyo rotary kiln.
1.Three ISO yenyika dzese dzakagadziriswa vibration vaongorori
2.Three Ⅱgrade NDT mainjiniya
3.32 magetsi, mechina, maitiro, kugadzira simba uye mainjiniya ehurumende
4.Iye midziyo yekugadzirisazve nzvimbo - Kugadzirisa akasiyana emidziyo nhare uye mhepo compressors.
5.Maintenance, Kuchengetedza, Kudzidziswa.
6.Engineering technical technical center- Kuita bhizimusi rekubhidha, kupa dhipatimendi rekutengesa kunze uye kubvunza kwehunyanzvi hwehunyanzvi
mashanu epakati mapurojekiti
1.Kiln cylinder inopenya kupisa kushandiswa kweprojekti
Kambani yedu yakanangana nekutsvaga mumusika uye yakapedzisa dhizaini yemuteresi weinotenderera hari ganda rinopenya kuti ipe magetsi, yekugezesa mvura yekupisa uye kupisa munguva yechando. Isu tinogona kuita saiti kuferefeta uye dhizaini zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi kuti vape modular uye sevhisi sevhisi kune vatengi.
Kunyanya mune chikamu chemagetsi chizvarwa, Kambani yedu inotora yakaderera-tembiricha simende chidhina kupisa simba magetsi chizvarwa tekinoroji. Iyi tekinoroji iri kushandisa yakaderera tembiricha tsvina kupisa iyo yakaburitswa kubva muhogi inlet uye kiln nzira yekutengesa simba remagetsi. Iko hakuna mafuta ekushandisa uye hapana kusvibiswa panguva yemagetsi kugadzirwa. Iyo yakasvibirira simba rekugadzira tekinoroji ine yakawanda yehupfumi kubatsirwa, yakachena uye yakasvibirira, inoenderana neyakachena uye yekuchengetedza magetsi mutemo wehurumende. Iyo ine yakakura nzvimbo yekuvandudza uye tarisiro.
1, Iyo mvura yakanyoroveswa unit inoshandisa flash evaporation tekinoroji, iyo inogona kuve nekushandiswa kwakanyanya kwemarara kupisa kusimudzira zvakanyanya kukosha kwehupfumi hwejenareta yakatarwa
2, Iyo AQC bhaira yakatwasuka mhando. Iyo yakagadzirirwa pre-deduster (kugadzirisa imba) pamberi pebhaira kuitira kudzikisa guruva rinopinda muchibhaira.
3, PH bhaira ndeye yakatwasuka mhando, kutora inomanikidzwa kutenderera yemhepo homwe bhaira; Imwe bhenefiti ndeye kudzikisa guruva kuisirwa kwenzvimbo yekupisa uye imwe bhenefiti kudzikisa huwandu hwezvinhu zvekubvarura, uye kudzikisira kubuda kwemhepo kwesystem.
4, Iyo yakaparadzirwa yekudzora sisitimu inotora iyo Hardware uye system software yekambani inozivikanwa pasi rese. Zviri mberi uye hwakavimbika.
2.Intelligent logistics system chirongwa - inoshandisa kudzora kwenhamba uye tekinoroji yemakadhi kuvandudza huwandu hwekurongedza kuendesa zvakanaka uye kudzikisira kukanganisa kwevanhu.
3.Kiln uye chirahwe chekutumira kunze kwenyika chirongwa - inoshandisa neural network, modhi kuzivikanwa uye yakapfava sensor tekinoroji, inoumbwa nemhando yekufungidzira kudzora algorithm kutsiva mashandiro ekugadzira, kuona otomatiki kutonga uye kusvika zvinangwa zveyakagadzikana mhando, yakagadzikana huwandu, kuponesa marasha, kuchengetedza magetsi uye gadziriso yekugona inovandudzika pane yakadzikama yehuni mashandiro nyika.
4.Energy manejimendi sisitimu chirongwa- inounganidza, kuongorora, kuongorora uye kugadzirisa iyo svikiro repakati data nekumisikidza simba manejimendi sisitimu chikuva kuti iwane magetsi ekuchengetedza uye emission kudzikisira zvinangwa.
5.Machine anotsiva vanhu munzvimbo dzakakosha-tora chakangwara chirimwa sekutungamira kwechinangwa, shandisa marobhoti mumabasa ane njodzi huru. Iye zvino mashanu maR & D mapurojekiti akasimbiswa kuti aongororwe.
①Replace bhuku kurodha pamwe bhegi mhando robhoti
EpDzorera chakagadzirwa bhegi isa pamwe otomatiki kurongedza
Snow "Snowman" yekuchenesa robhoti kune iyo grate inotonhorera
④Tsiva iko kwekuita oparesheni ne preheater block yekuchenesa uye ganda rekugogodza robhoti
⑤Tsiva yekuchengetera yekuchengetera yekuchenesa pamwe nekuchenesa robhoti
Midziyo uye Spare Zvikamu
Vertical mill (mbichana mbichana mbichana, simende yakatwasuka chigayo, chigayo chinotenderera), jira rinotenderera, hunyanzvi hwekubata inotonhorera uye yekudhinda roller nezvimwe izvo zvakagadzirwa nekambani inotengesa boka zvinogona kusangana nechishuwo che2500-10000tpd yeyakaomeswa maitiro esamende yekugadzira mitsara. .
Yakabatana neGerman Siemens Kambani uye Zhejiang Central Kudzora Co, Ltd, kambani yakagadzira uye ikaburitsa inotungamira indasitiri yehunyanzvi otomatiki yekudzora system, nyanzvi yekuongorora system yehorivhani kiln, OTS simulating yekudzidzisa system uye kuvaka simba yekuchengetedza system.
Iyo kambani inotora yepamusoro nhanho yemamishini ekunze kuburitsa kusakara kusagadzikana, kupisa nemishonga uye ngura inodzivirira castings, iyo inogona kusangana nechishuwo che2500-10000tpd yematsva akaoma maitiro simende yekugadzira mitsara.
Yakabatana neCN Gpower Gearbox Co., Ltd uye NGC boka, kambani yakagadzira gearbox yekuchengetedza nzvimbo kuti ipe nyanzvi giya rekugadzirisa mhinduro yemakambani emabhizimusi.
"Kuhwina-kuhwina" ndicho chinangwa chedu nhengo dzeJIDONG. Tinotarisira nomwoyo wose kushandira pamwe kwako!